musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Qatar Airways inorwisa kutengeswa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • nhau • vanhu • Qatar Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Sustainability News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Ongororo yeIllegal Wildlife Trade (IWT) yakagadziriswa neInternational Air Transport Association (IATA), nerutsigiro rweROUTES, sechikamu cheIEnvA - IATA manejimendi manejimendi uye ongororo yendege. Kuteerana neIWT IEnvA Maitiro uye Anokurudzirwa Maitiro (ESARPs) inogonesa vanosaina ndege kuUnited for Wildlife Buckingham Palace Declaration kuratidza kuti vaita maConstituents akakodzera mukati meChipupuriro.
Qatar Airways, nhengo yekutanga yeUnited for Wildlife Transport Taskforce, yakasaina nhoroondo yeBuckingham Palace Declaration muna 2016.
Buckingham Palace Chirevo chakanangana nekutora matanho chaiwo ekuvhara nzira dzinoshandiswa nevatengesi vekutengesa zvisiri pamutemo mhuka dzemusango, kufambisa zvigadzirwa zvavo.
Muna Chivabvu 2019, Qatar Airways yakava ndege yekutanga pasi rose kuwana chitupa kuongororo yeIllegal Wildlife Trade (IWT).
Qatar Airways yakawedzera kutora chikamu kwayo USAID NZIRA (Kuderedza Mikana Yekutakura Zvisiri pamutemo Kwezvipenyu Zviri Mungozi) Kubatana, kuchisimbisa kuzvipira kwayo kurwisa kutengeswa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango uye zvigadzirwa zvayo.
Qatar Airways, nhengo yekutanga ye Yakabatana yeWildlife Transport Taskforce, yakasaina iyo nhoroondo Chirevo cheBuckingham Palace mu2016, yakanangana nekutora matanho chaiwo ekuvhara nzira dzinoshandiswa nevatengesi vekutengesa zvisiri pamutemo mhuka dzemusango, kufambisa zvigadzirwa zvavo. Pashure muna Chivabvu 2017, ndege iyi yakaramba ichisaina Memorandamu wekutanga wekunzwisisa neROUTES Partnerhip. Muna Chivabvu 2019, Qatar Airways yakava ndege yekutanga pasi rose kuwana chitupa kuongororo yeIllegal Wildlife Trade (IWT). IWT Yekuongorora chitupa inosimbisa kuti Qatar Airways ine maitiro, kudzidziswa kwevashandi uye maprotocol ekumisikidza ari munzvimbo ayo anoita kuti kubiridzira kwezvigadzirwa zvemhuka dzesango zvisiri pamutemo kuome.
Qatar Airways Mukuru weGroup Executive, Anokudzwa VaAkbar Al Baker, vakati: “Kutengeserana kwemhuka dzesango kusiri pamutemo uye kusingagadzirisike kunotyisidzira zvipenyu zvedu zvepasi rose, uye kunopa njodzi kuhutano nekuchengeteka, kunyanya munharaunda dzakadzvinyirirwa. Tiri kutora matanho ekukanganisa kutengeserana kusiri pamutemo kuitira kuchengetedza zvipenyu zvakasiyana nekuchengetedza zvisikwa zvedu zvisina kusimba. Tinoramba takazvipira nevamwe vatungamiriri veindasitiri yendege kusimbisa mutemo wedu wekusashivirira kutengeswa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango nezvigadzirwa, uye tinobatana neRoutes Partnerhip mukuti - 'Hazvifambe Nesu'. "Ticharamba tichishanda nevatinoshanda navo kusimudzira nekuvandudza zviwanikwa zvemhuka dzesango zvisiri pamutemo kuchengetedza zvisikwa izvi zvatinokoshesa."
VaCrawford Allan, Mutungamiri weRoutes Partnership, vakatambira hutungamiriri Qatar Airways yakaratidza mukuedza kudzivirira kubiwa kwemhuka dzesango vachiti: Buckingham Palace Chirevo uye kuchinangwa cheRoutes Partnership. Ndinodada nekuona kuti Qatar Airways iri kuenderera mberi nekuedza uku uye ichiva chikamu chemakambani ari kuramba achingokura kuti Hazvifambe Nesu. ”
Denda re COVID-19 rakaratidza kuti mhosva yemhuka dzesango inotyisidzira kwete chete kune zvakatipoteredza uye zvipenyu, asiwo kuhutano hwevanhu. Kunyangwe paine kurambidzwa kufamba, mishumo yekubatwa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango mugore rapfuura kwakaratidza kuti vatengesi vachiri kutora mukana wavo kupinza zvisiri pamutemo nenzira yekutakura nendege. Qatar Airways inoziva kuti nerutsigiro kubva kuUSAID ROUTES kudyidzana, indasitiri yekufambisa nendege inogona kuenda kune yakasvibira nyika inosanganisira zvisikwa pamwe nekuchengetedza mhuka dzesango, zvikamu zvakakosha zvehupfumi hwemhuka dzesango pamwe nenzvimbo dzemunharaunda.
Sekuvhura kwekutanga ku Buckingham Palace Declaration munaKurume 2016 uye nhengo yekutanga yeUnited for Wildlife Transport Taskforce, Qatar Airways ine zero-shiviriro mutemo kune kutakurwa kwemhuka dzesango zvisiri pamutemo uye zvigadzirwa zvavo. Qatar Airways Cargo yakaparura chitsauko chechipiri chechirongwa chayo chekusimudzira WeQare: Gadzirisazve iyo Planet kutanga kwegore rino, yakanangana nekutakura mhuka dzesango kudzokera kunzvimbo yavo yechisikigo, mahara. Chekutanga chekutakura nhumbi kuchengetedza mhuka dzesango uye kuisazve nyika inoenderana nekuzvipira kwendege kurwisa kutengeswa kwemhuka dzesango uye kutengeswa zvisiri pamutemo kwemhuka dzesango nekudaro kuchengetedza nharaunda nepasi.